Paper Packaging - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
Fancy Tsika Yakadhindwa Chipo Kutakura Pepa Bhegi
Packaging: maererano nezvinodiwa nevatengi
Fancy tsika yakadhindwa yezvipo kurongedza bepa Chipo chekwama bhegi, chine mhando yakanaka uye tsika dhizaini iwe une kambani logo. Pepa rinorongedza bepa, kurongedza zvigadzirwa zvako, uine shinny yakakosha ficha, Yako pepa bhegi, ine yakakosha dhizaini uye yako logo yakadhindwa, izere nemakambani ako maitiro....
Krafta pepa rinoputira rairo bhokisi
Krafta pepa rinoputira rairo bhokisi Kraft Pepa Bhokisi, rinotaridzika riri nyore asi rinotonhorera, rine logo rakadhindwa Yakakwirira mhando Pepa Packaging Bhokisi, ita kuti zvigadzirwa zvako zvibate vatengi ziso 'revatengi Kraft Folding Box Liyang Pepa zvigadzirwa co., Ltd ndeye fekitori uye yekutengesa kambani...
Nhema matte tsika bepa chipo kurongedza bhegi
Packaging: K = K Makoroti Kadhi Bhodhi Mabhokisi Ekurongedza
Nhema matte tsika bepa chipo kurongedza bhegi Pepa chipo bhegi, yakanaka giredhi zvinhu neumbozha hwakadhindwa kuti uite musanganiswa wakanaka Kavhara bepa bhegi, kurongedza zvigadzirwa zvako nemubato, zviri nyore kutakura. Pepa bhegi rakadhindwa, ine yako yakakosha logo yakadhindwa. Unoda zvigadzirwa zvemhando...
Yakachipa cosmetic pepa inorongedza bhokisi nekupedzisa
Yakachipa cosmetic pepa inorongedza bhokisi nekupedzisa Pepa cosmetic bhokisi, reverse tuck box ye cosmetic. Cosmetic kurongedza bhokisi, rakachipa asi rakasarudzika rekushongedza bhokisi rine banga UV uye sirivha stamping Yakachipa bhokisi rekuchenesa, chengetedza mutengo wako uye utore rakakodzera bhokisi bhokisi....
Fancy tsika yakadhindwa mapepa echipo bhegi kurongedza
Fancy tsika yakadhindwa mapepa echipo bhegi kutakura Pepa bhegi rakadhindwa, tsika pepa bhegi, ine matte lamination, yakanaka kutarisa. Packaging pepa bhegi, bepa Chipo bhegi rekutakura mabhegi ezvigadzirwa, zvemhando yepamusoro uye neine tsika tsika. Pepa bhegi rezvigadzirwa, zvigadzirwa zvinorongedza bhegi zvine...
Tsika T-shati mapepa ekutakura bhokisi
tsika T-shati mapepa ekuisa bhokisi T-shati yepepa rekutakura bhokisi bhokisi rakasimbisa makadhibhokisi, tinoriita mumhando yepamusoro dhizaini bhokisi, riine yepamusoro tsika dhizaini kudhinda, bhokisi dhizaini rakagadzirwa rakagadzirwa, mamwe mabhokisi zvitaera sevharo uye base bhokisi, denderedzwa bhokisi, bhokisi...
Kupisa Yakagadziriswa White Pepa Pakeji Bhegi rine Handle
Kupisa Yakagadzirirwa Pepa Packaging Bhegi neHandle Pepa bhegi chena, chena pepa bhegi rine kubata uye tsika yakadhindwa, yakakwirira kirasi. Pepa rinorongedza bhegi, bhegi rekutakurisa chigadzirwa chine logo yakadhindwa, izere nekambani chimiro. Mapepa ebhegi kutenga, akanaka mhando pakutenga, nyore kutakura uye...
Brown kraft bepa Singlass yekuisa bhokisi
Brown kraft bepa Singlass yekuisa bhokisi sanglass pepa rekutakura bhokisi rakagadzirwa neakaomarara brown kraft pepa Nutural brown color pepa yakasimba bhokisi ine yakasarudzika yegoridhe stamping logo, iwe unogona zvakare kusarudza imwe color foil Kugamuchirwa kuti uite yako sunglass bhokisi! Tsvaga zvigadzirwa...
Glossy Chigadzirwa Pepa Packaging Bhegi ine Rangi
Glossy chigadzirwa mapepa ekutakura mabhegi ane logo Pepa glossy bhegi, pepa bhegi rine glossy lamination, yakashongedzwa uye yakanaka. Chigadzirwa pepa bhegi, pepa bhegi zvigadzirwa kurongedza, yakakwira mhando uye izere neyako kambani chimiro. Pepa rinorongedza logo bag, tsika yakadhindwa pepa bhegi ine logo. Tsvaga...
Bhurukwa reCustom Chetsika Yekutenga Chikwama chine Handle
Nhema yakasviba mapepa ekutenga mabhegi akabata Pepa rekutenga logo chikwama, bhegi rekutenga rine logo, yakanakisa uye fashoni. Pepa bhegi dema matte, pepa bhegi rine logo uye yekupedzisa nzvimbo UV, inogona kuratidza zvigadzirwa zvako zvakanaka. Pepa rezvipo bhegi rekutakura, chikwama chepepa bhegi, kusimudzira bepa...
Bepa dema rekutenga kurongedza bhegi rakabata neti
Bepa dema rekutenga kurongedza bhegi rakabata neti Matte dema pepa bhegi, matte lamination pepa bhegi ine logo yakadhindwa. Pepa rekutenga bhegi rine mucherechedzo, bepa rezvipo bhegi, bhegi rekutakura mapepa, emhando yepamusoro uye yakanaka. Pepa rinorongedza zvipo muhomwe, bhegi repepa bhegi, yakajairwa size uye...
Pepa kurongedza zvipo kupeta bhokisi nebhonzo
Pepa kurongedza zvipo kupeta bhokisi nebhonzo Folding bhokisi pepa, pepa rinopeta bhokisi rine logo rakadhindwa uye ribhoni, yakajeka uye fashoni . Folding bhokisi neribhoni, bhokisi rekupeta, riri nyore kupeta uye chengetedza mutengo wekutakura . Yakasarudzika kupeta bhokisi, tsika tsika uye dhizaini, neako chimiro,...
Yakachipa Yakazara Muvara Pepa Chigadzirwa Pakeji Bhegi
Yakachipa izere nemuvara wepepa chigadzirwa chakaputirwa bhegi Zvigadzirwa mapepa bhegi, pepa bhegi zvigadzirwa kurongedza, yakakwirira zvemhando yepamusoro dhizaini. Mapepa mabhegi echipo, zvipo mapakeji epepa bhegi, tsika yekudhinda logo nemubato. Pepa Packaging Mabhegi, akanaka giredhi zvigadzirwa kutakura, zvipo...
Zvishongo mapepa ekuisa bhokisi ne velvet yekuisa
Zvishongo mapepa ekuisa bhokisi ne velvet yekuisa akagadzirwa nemaoko kadhibhokisi bhokisi, akaomesesa kadhibhokisi bhokisi rinoshandiswa kushongedza zvishongo jewelry pepa bhokisi , zvishongo bhokisi kurongedza , zvishongo bhokisi ne velvet yekuisa yezvishongo bhokisi kurongedza Nomutsa ziva kuti zvigadzirwa zvedu...
Yakadhindwa bhodhi kadhibhodhi kurongedza bhokisi rine lid
Yakadhindwa bhodhi kadhibhodhi kurongedza bhokisi rine lid Yakadhindwa bhandi bhokisi , neyemhando yepamusoro dhizaini kudhinda logo yako kana dhizaini bhandi kadhibhodhi kurongedza bhokisi, chivharo uye base bhokisi maitiro bhandi bhandi bhokisi rine chifukidzo chebhanhire rako Li yang Kudhinda ichakupa zvigadzirwa...
tsika wallet chipo mapepa ekutakura bhokisi
tsika wallet chipo mapepa ekutakura bhokisi chikwama chepepa bhokisi , rine mhando yepamusoro kudhinda inobatirwa chiratidzo chako kana dhizaini chikwama chakaputirwa bhokisi, rakasimba bhadhibhokisi bhokisi muvharo uye base bhokisi maitiro Yakapeteka chikwama chebhokisi bhokisi nepafudzi kune wallet kurongedza Li...
Krafta pepa pasi pekupfekedza bhokisi newindo
Krafta pepa pasi pekupfekedza bhokisi newindo Kraft pepa underwear bhokisi, kraft bepa rine logo rakadhindwa, rakapusa asi mafashoni . Pasi pekuputira bhokisi, underwear bhokisi, pfupi bhokisi kurongedza chipo. Kraft bhokisi rine hwindo, imwe chete bhokisi nebhokisi rePVC, rinogona kuratidza zvigadzirwa zvako mushe ....
Ichena chena mapepa ebhegi ane logo yakadhindwa
Ichena chena mapepa ebhegi ane logo yakadhindwa Iro chena mapepa ekutakura bhegi, bepa rezvipo bhegi, bhegi rekutenga rine logo rakadhindwa. Chipo chebhegi bhegi nemucherechedzo, chena mapepa ebhegi ane dema logo, akareruka asi asina kumbobvira apera chimiro. Logo yakadhindwa mapepa ebhegi, tsika yakagadzirwa saizi...
tsika cosmetic eyelash pepa rinopfekedza bhokisi
Tsika yekushongedza eyelash pepa rekutakura bhokisi Eyelash kurongedza bhokisi , yakasarudzika bhuku rakagadziriswa bhokisi maitiro e eyelash kurongedza Eyelash pepa bhokisi , rakasimba makadhibhokisi bhokisi neako chiratidzo kudhinda kune eyelash kurongedza Tsvaga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemutengo wakanaka,...
Tsika mhete zvishongo mapepa ekutakura zvipo bhokisi
Tsika mhete zvishongo mapepa ekutakura zvipo bhokisi Mhete yepepa bhokisi , rakaomeswa kadhibhokisi bhokisi, rakaputirwa neyekunyorera pepa Cute rin'i chishongo bhokisi , rakagadzirwa muvharo uye base bhokisi dhizaini, ine velvet mukati me pad for ring / earring yakakodzera Kugamuchirwa kune tsika gadzira iyo...
Kutakura Mabhokisi Akagadziriswa Kutumira Mailer Shangu T-shati Bhokisi
Yakasarudzika Yakawanda Yakaverengedzwa Pepa Pepa Mabhokisi
Wakajeka Bhokisi diki Rakaipakata Packaging Tsika Eyelash Mabhokisi
Tsika Goridhe kadhibhodhi dhizaini kukisheni bhokisi
Anoshamisira Tsika Velvet Zvishongedzo Packaging Set Bhokisi
Round Pepa Tube Perfume Packaging Chipo Bhokisi
cosmetic bhokisi remesohadow pa Palete nemagineti